मन्त्रीमा मेरो नाम आएकै हो, छलफल गरेरै गगन जीलाई छोडेको हुँ: भिमसेन दास प्रधान | KTM Khabar
२०७३ भदौ १८ गते १२:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । भर्खरै प्रचण्ड नेतिृत्वको सरकारमा मन्त्रि मण्डल गठन हुदै गर्दा, नेपाली कांग्रेसको सिटौला खेमाबाट मन्त्री हुने नाम चर्चामा रेहेका भिमसेन दास प्रधान, मन्त्रि बन्न त सकेनन् तर उनले युवानेता गगन थापालाई ठाउँ खाली गरिदिए । ज्युदो पार्टीमा गुट उपगुट हुनु सामान्य नै भन्न रुचाउथे । उनी काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद हुन । उनै भिमसेन दास प्रधानसंग ktmkhabar.com का लागी समसामयिक विषयमा रबि भट्टराईले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश:
यहाँलाई केटीएम खबरको विशेष सम्वादमा स्वागत छ ।
कस्तो हुनुहुन्छ ?
कसरी दिनहरु विताउदै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचित एउटा सांसद हु, क्षेत्रका साथीहरुको कामहरु पनि परी रहन्छ अझ म पुर्व जिल्ला सभापति पनि हु पार्टीको कामहरु परिरहन्छन् । साथीहरुका समस्याहरुलाई ठाउँ ठाउँमा भन्दिन, जनताहरुका समस्याहरुलाई सुन्दै साथीहरुलाई सहयोग गर्दैैै दिनहरु वितिरहेको छ ।
तपाईलाई काठमाण्डौ क्षेत्र नं ६ का जनताले निकै रुचाएका छन् हो ?
रुचाउछन, नरुचाएको भए त म निर्वाचित हुने नै थिइन नि, म चाहीँ वास्तवमा २०३३ सालमा गणेशमान र बिपी निर्वासन जिवन विताएर आई सकेपछी मेलमिलाप निती लिएर उहाँहरु काठमाण्डौँ फर्कनु भयो र म विश्वविद्यालयमा अध्यनरत थिए र त्यो बेलाका नेता नेबि संघमा हरि न्यौपाने, बद्रि पौडेल उहाँहरुसंग काम गर्थे र उहाहरुकै साथमा हाम्रा नेताहरुलाई रिसिभ गर्न विमानस्थल गएको थिए । त्यहा पुलिसले लाठिचार्ज गर्यो त्यहाँ देखि गणेशमानको जिवन पर्यन्त उहाँसंग काम गर्ने मौका मिल्यो त्यसले मलाई केही पहिचान दियो । ३६ र ४६ को आन्दोलनमा कुनै पदमा थिइन तर सहयोगी भुमिका निभाएको थिए । ४६ साल पछी म प्राध्यापक संघको पहिलो निर्वाचित महासचिव अध्यक्षमा सुप्रभा घिमिरे हुनुहुन्थ्यो । मैले प्राध्यापक संघमा हुदा थुप्रै कामहरु गरेको छु । त्यसैले विश्वविद्यालयमा अहिले पनि मेरो बर्चस्व कायमै छ ।
प्राध्यापन क्षेत्र र राजनीतिलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?
मैले प्राध्यापन र राजनितिसंगै गरेको हु । अब विश्वबिद्यालयको राजनीतिमा चाहिँ त्यो बेला पार्टी प्रतिवन्धमा थियो । ३३ साल तिर, ३६ सालमा हामीले राजा महेन्द्रले विघटन गरेको प्राध्यापक संघलाई पुनः जिवित बनायौ प्रोफेसर बिसी मल्लको नेतृत्वमा त्यति खेर मालेहरु थिए । सरकारप्रति तिव्र अलोचना हुन्थ्यो । तर हामीलाई समात्न चाहीँ सक्दैन थियो । नेबिसंघमा पनि त्यस्तै थियो, प्रतिवन्ध थियो । पछी एक खालको महोल विश्वविद्यालयमा बन्दै आयो । त्यसपछी विद्यार्थी र हामी राजनीतिका साथै विद्यार्थी र हम्रा हक हितमा तिरन्तर लडिरह्यौँ । मैले महासचिव रहुन्जेल पार्टीको पद लिईन र मैले ५५ सालमा अध्यक्ष जिते । अब म रहुन्जेल एमालेका साथीहरुले कहिल्यै नजित्ने अब चुनाब पनि बहिस्कार गर्नु भयो । उहाँहरुले र मैले समानुपातिक समावेसिको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने अवधारणा ल्याए । ३० प्रतिशत मात्रै एमालेका शाथीहरु थिए । त्यहाँ पनि मेरो पहिचान बन्यो र त्यसपछी मात्रै मैले जिल्लामा सदस्यता लिए, सचिव भए उपाध्यक्ष भए र अध्यक्षसम्म भए र जनआन्दोलनको नेतृत्वसम्म गर्ने अवसर मिल्यो ।
तपाई कस्तो सपना लिएर राजनीतिमा छिर्नु भयो नि ?
एउटा प्राज्ञिक पेशाबाट अएको हुनाले चाहीँ मैले राजनीतिलाई सेवाको भावले लिने गरेको छु र यो सबैले यसैगरी लिनु पनि पर्छ । धेरै नेताहरुले आफ्नु स्वार्थको लागि राजनीतिलाई लिईरहेका छन । बिपी,गणेशमान र कृष्णप्रसाद वाहेक साच्चै नेतृत्व दिन सक्ने नेता निस्किन सकेनन् । यो विडम्बना पनि हो ।
भर्खरै मन्त्रिमण्डल गठन हुने संघारमा, तपाई मन्त्री हुने हल्ला राम्रै चलेको थियो तपाई हुनु भएन किन ?
मन्त्री हुनु ठुलो कुरा हैन, पहिचान बनाउन सक्नु ठुलो कुरा हो । मेरो नाम आएकै हो, पछी छलफल गरेरै गगन जीलाई मैले छोडेको हुँ ।
तपाईको पार्टीमा गुट छ ?
गुट छ, एकदमै छ । जहा पनि हुन्छ गुट तर क्रियटिभ कामका लागि काम हुनुपथ्र्यो ।
तपाई चाही कुन प्यानलको नी ?
म पहिले देखि नै संस्थापन पक्षको हुँ । काठमाडौँमा एकतर्फ प्रकाश मान जीहरुको समुह पहिल्यैै देखि थियो । अर्कोतर्फ प्रकाश मान जीहरुले पाखा लगाउन खोज्नेरुको समुह जस्तो देखिन्छ तर पार्टीमा लविंग हुन्छन । त्यो स्वभाविक पनि हो ।
त्यसो भए तपाई सिटौला पक्षको हो ?
हो हो, ६२, ६३ को आन्दोलनमा केन्द्रको नेतृत्व सिटौलाले गर्नु भएको थियो र काठमाण्डौको नेतृत्व मैले गरेको थिए । त्यही भएर पनि उहाँसंग सामिप्यता बढ्नु स्वभाविक हो ।
तपाईको समाज परिवर्तनमा भुमिका के रहन्छ ?
मेरो एउटै धारणा छ, हाम्रा नेताहरुमा पार्टी प्रतिको कल्चरको कमी छ । जो सभापती जित्छ उसैलाई बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्यो भने मात्रै सिंगो पार्टी बलियो बन्छ ।
गुट उपगुटले गर्दा सक्षम मान्छे पछाडी पर्छन भन्छन् नी ?
हैन त्यसमा त गगन र मेरो विषयमा त छलफल भएर नै गरेको हो । गगन थापालाई मैले सम्भावना बोकेको मान्छे मानेको छु । म सिनेटमा महासचिव हुदाँ उनी त्रिचन्द्रमा सभापती थिए ।
तपाईले मन्त्रिपद छोड्नु भएको हो गगन थापालाई ?
हाम्रो आन्तरीक छलफल भएर नै छोडेको हो । मेरो पनि अर्को पटक समय आउछ भन्ने लागेर छोडेको हुँ । उहाँले ईच्छा देखाउनु पनि भयो ।
समग्र देश विकास गर्न के गर्यो भने हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेसम्म हाम्रा नेताहरु सत्तामा हुदा चाही इन्डियाको विरोधी हुने । सत्तामा जादा चाही प्रोइन्डियन हुने तर त्यो हुन हुदैन । हामीले दुवै छिमेकीहरुलाई विस्वासमा लिएर जानैपर्छ । दोस्रो जडिबुटी , शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा जोड दिनु पर्छ । ह्युमन रिसर्च डेभलप गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
हामिले यही केही काम गर्न पर्छ र समाजलाई केही न केही योगदान दिनु पर्छ, भन्ने मलाई लाग्छ ।
काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद भिमसेन दास प्रधानसंगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोस् :-